Google Maps dia hilaza aminao ny toerana hijanonanao | Vaovao IPhone
Google Maps dia efa afaka milaza aminao ny hamenoan'ny fifamoivoizana amin'ny làlana halehanao, fa… inona no hitranga rehefa tonga any amin'ny toerana halehanao ianao? Toa efa afaka manome, farafaharatsiny, ny fampiharana raha toa ka mety misy toerana ipetrahana noho ny fiasa vaovao iray izay hita tao amin'ny beta farany 9.44. Ny fisian'ny habaka amin'ny toeran-kaleha voafantina dia aseho amin'ny ambaratonga samihafa: "mora", "salantsalany" na "voafetra", miaraka amin'ny toe-javatra farany satria ilay iray manana fiantsonana kely indrindra hita sy asongadina mena. Raha vantany vao manomboka ny fitetezana dia misy antsipiriany bebe kokoa omena amin'ny alàlan'ny torolalana milaza fa ny fijanonana manodidina ny lalana hahatongavanao dia tsy "mora, amin'ny ankapobeny" na "voafetra", ohatra.
Waze sy INRIX dia efa nampiroborobo serivisy mitovy amin'izany hatramin'ny volana septambra lasa teo, ka Google dia mety manandrana manome antoka fa farafaharatsiny mitazona ny fampiharana GPS fitetezana hatrany amin'ny resaka fifaninanana miaraka amin'ireo safidy sisa. Ny rindranasa Waze dia afaka mahita antsika toerana fijanonana maimaimpoana maimaimpoana, na izany aza, rehefa mandeha ny fampahalalana dia tsy manome afa-tsy topy maso ny zava-misy ny fampiharana Google Maps. Tsy mbola fantatra mazava ny fomba hanangonana ny angon-drakitra Google momba ireo toerana malalaka.
Taorian'ny fisintomana fitsapana maro izay natao tamin'ny rindranasa, ny fisian'ny fiantsonana dia tsy mandeha amin'ny toerana rehetra ao amin'ny
notsaraina tany Paris. Koa satria Ars Technica tsy misy na inona na inona hiseho ao amin'ny faritra New York / Long Island koa. Na izany aza, Android Polisy miantoka fa miseho any amin'ny toerana Maryland io fampahalalana io. Hatreto dia toa voafetra amin'ny toeram-pivarotana, seranam-piaramanidina, ary toerana ho an'ny daholobe hafa ny toerana, izay tsy mahagaga raha mbola ao anaty beta ny fisehoan-javatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Google Maps no hilaza aminao ny toerana hijanonanao